vaky nandositra tampoka lehilahy 33 taona mpanondran’olona ka nifanjevoan’ny polisy sy ny fokonolona ka tratra teo amin’ny “3 chemins” Ambohipo. Ny vehivavy iray tamin’ireo aondrana kosa nanararaotra izany ka tafaporitsaka rehefa variana nanenjika ilay lehilahy ny polisin’ny SCES. Ny zoma teo tamin’ny 10 ora maraina no nitranga izany.
Araka ny loharanom-baovao voarain’ny polisin’ny « Service Centrale des Enquêtes Specialisées », misy mpandefa olona hiasa any amin’iny firenena Arabo iny. Eny Ambohipo no fanaovany fotoana
amin’ireo mifanaraka aminy. Nidina teny ifotony ny mpitandro filaminana, ka nahatratra ireo olona telo ireo ka anisan’ireo olona haondrana ireto vehivavy roa, ary ilay lehilahy no mpandefa.
Nilaza ilay mpanondran’olona tamin’ny famotorana fa 1.200.000 ariary isan’olona no alainy. Voaporofo izany tao amin’ireo someso maro izay hita tao anaty findain’ilay vehivavy iray izay tafaporitsaka, sy finday maro izay hifampiresahan’ity mpanondrana olona ity. Mitohy ny fikarohan’ny polisy ireo namany. Natolotra ny fampanoavana afak’omaly sabotsy moa ity lehilahy ity.